Sobstansa (teôlôjia) - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Sobstansa (teolojia))
Ny teny hoe sobstansa dia teny ampiasaina ao amin'ny teôlôjia kristiana hiresahana momba ny fifandraisan'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Teny nohagasina avy amin'ny teny latina hoe substantia, izay nampiasaina tao amin'ny Fiangonana tandrefana miteny latina, ny hoe sobstansa. Ny teny grika mifandraika aminy dia ny hoe οὐσία / ousίa, izay nampiasaina tao amin'ny Fiangonana tatsinanana miteny grika. Manoloana io famaritana ny fifandraisan'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina io dia niseho ny firehana sy fampianarana samihafa toy ny hômôosisma sy ny hômôiosisma ary ny heterôosisma na anômeisma.
1 Hevi-teny sy dikan-teny
1.1 Hevi-teny voalohany
1.2 Hevi-teny teôlôjika
1.3 Dikan-teny malagasy
2 Ny "fampianarana marina" momba ny sobstansa
2.1 Ny hômôosisma
3 Ny "fampianaran-diso" momba ny sobstansa: ny arianisma
3.1 Ny arianisma
3.1.1 Ny hômôiosisma
3.1.2 Ny hômeisma
3.1.3 Ny heterôosiana
3.1.4 Ny anômosiana
3.2 Ny mônarkianisma
Hevi-teny sy dikan-tenyModifier
Ny hevitra voalohan'ny teny latina hoe substantia dia "fitoerana ao ambany". Niitatra ny hevitr'io teny io ka nanondro ny raha (matiera) iforonan'ny zavatra iray ka tsy heverina ny fisehony na ny endriny mety miova ety ivelany. Ny teny grika hoe οὐσία / ousίa kosa dia avy amin'ny matoanteny grika hoe εἶναι / einai izay midika hoe "misy", afa-tsy hoe ampiasaina ho matoanteny andry ilay teny. Ny ousίa dia milaza ny maha-izy ny zavatra iray. Ny hoe ousia dia nadika amin'ny teny latina amin'ny hoe substantia na essentia, izany hoe ilay zavatra na toetra tsy miova sady marin-toerana.
Ny Fiangonana tandrefana no nampiasa ny teny latina hoe substantia. Ny sobstansan' Andriamanitra dia ny "maha izy azy an' Andriamanitra", ny fototra maha Andriamanitra an' Andriamanitra, ny tsy itovian' Andriamanitra amin'ny zavatra noforonina. Ampiasaina ny teny hoe substantia rehefa hanao fampisampanan-teny ka ahazoana ny hoe consubstatialita. Mitovy substantia, hoy ny mpanohana ny Trinite, ireo persona telon' Andriamanitra ka izany fitovian'ny substantia izany no atao hoe consubstatialita. Ny Fiangonana tatsinanana dia nampiasa ny teny grika hoe ουσία / ousia, izay mitovy hevitra amin'ny teny latina hoe substantia. Ilay atao hoe consubstatialita amin'ny teny latina dia atao hoe ὁμοούσια / homoousia amin'ny teny grika.
Ao amin'ny fanekem-pinoana nikeana ampiasain'ny fiangonana protestanta malagasy dia izao no voasoratra: "miray Sobstansa (izay maha-Izy Azy) amin'ny Ray", fa ao amin'ny fiekem-pinoana niseana ampiasain'ny fiangonana katôlika malagasy dia ahitana ny hoe "iray fomba amin'ny Ray".
Ny "fampianarana marina" momba ny sobstansaModifier
Ny hômôosisma dia fampianarana izay ilazana fa mitovy sobstansa amin'ny Ray ny Zanaka sy ny Fanahy Masina ka noho izany dia Andriamanitra ny Ray, Andriamanitra ny Zanaka ary Andriamanitra ny Fanahy Masina. Tsy andriamanitra telo anefa ireo fa Andriamanitra tokana. Tamin'ny kônsily voalohany tao Nikea tamin'ny taona 325 no nampidirana izany tao amin'ny fampianaran'ny Fiangonana. Tamin'izany no nanamelohana ny fampianaran'i Ariosy. Nohamafisina tao amin'ny konsily manaraka maro izany sady noraketina tao amin'ny fanekem-pinoana kristiana maro, indrindra ny fanekem-pinoana nikeana. Izay rehetra tsy nanaraka ity fampianatrana ity fa nanao fampianarana hafa momba ny sobstansan'ny Ray sy ny an'ny Zanaka ary ny an'ny Fanahy Masina dia nampangaina ho nanao fampianaran-diso ka natao hoe heretika.
Ny Zanaka izay nateraky ny Ray dia miray sobstansa na iray fomba amin'ny Ray, ary ny Fanahy Masina izay nivoaka avy amin'ny Ray (sy avy amin'ny Zanaka, hoy ny Fiangonana tandrefana) dia miray sobstansa na iray fomba amin'ny Ray koa.
Ny "fampianaran-diso" momba ny sobstansa: ny arianismaModifier
Ny arianisma dia nino fa ny Zanak' Andriamanitra dia nisy talohan'izao tontolo izao nefa noforonin' Andriamanitra mivantana sady eo ambany fahefan' Andriamanitra Ray (sobôrdinatianisma). Ny fomba fijerin'i Ariosy dia izao: nateraka ny Zanaka ka toy ny noforonin' Andriamanitra voalohany indrindra ary avy eo namorona ny zava-drehetra tamin'ny alalan'ny Zanaka ny Ray. Ny fanekem-pinoana ariana fahafito (fanekem-pinoana faharoan'i Sirmioma) dia manambara fa ny homoousios (mitovy ousia na sobstantia) sy ny homoiousios (substantia na ousia mifanahaka) dia tsy araka ny Baiboly, lehibe noho ny Zanaka ny Ray. Izany fanekem-pinoana izany dia fantatra taty aoriana amin'ny anarana fanaratsiana hoe "Blasfeman'i Sirmioma". Maro ny endrika nisehoan'ny arianisma ka isan'izany ireo horesahina ao aoriana ireto, raha momba ny sobstansa. Tsy dia nisahirana loatra tamin'ny fifandraisan'ny Ray amin'ny Fanahy Masina ny Ariana raha momba ny sobstansa. Ireo izay tsy manao ny Zanaka sy ny Fanahy Masina ho Andriamanitra dia isan'ireo lazaina fa manao fampianaran-diso manohitra ny hômôosisma.
Ny antoko voalohany tamin'ny arianisma dia ireo avy any Atsinanana izay manaraka ny Fanekem-pinoana nikeana nefa misalasala ny amin'ny fampiasana ny teny grika hoe ὁμοούσιος / homoousios (latina: consubstantialita "fitoviana sobstansa", "fitoviam-pomba") ao amin'ilay fanekem-pinoana nefa tsy hita ao amin'ny Soratra Masina. Ny antoko faharoa amin'ny arianisma dia ireo izay nilaza fa tsy mitovy sobstansa amin'ny Ray ny Zanaka, na tena tsy mitovy aminy mihitsy.
Ao ireo Ariana manaraka ihany ny Fanekem-pinoana nikeana nefa nandanjalanja ka nampianatra momba ny hômôiosisma ka nilaza fa manana sobstansa hafa sahalahala fa tsy mitovy (grika: ὁμοιούσιος / homoiousios) amin'ny an'ny Ray ny Zanaka. Tsy ampifangaroina amin'ny hômôosisma ny hômôiosisma.
Ao ireo Ariana manaraka ny Fanekem-pinoana nikeana nefa nandanjalanja ny amin'ny fampianarana momba ny hômôiosisma ka mampianatra fa sahalahala (grika: όμοιος / hómoios) amin'ny Ray ny Zanaka.
Misy ireo izay nilaza tsotra fotsiny fa hafa fomba na tsy mitovy sobstansa (grika: ἕτεροούσιος / heteroousios) amin'ny Ray ny Zanaka.
Misy koa ireo izay nilaza fa tena tsy mitovy (grika: ἀνὅμοιος / anomoios) amin'ny Ray ny Zanaka.
Ny mônarkianisma dia vondrom-pampianaram-pinoana kristiana niseho tamin'ny taonjato faha-2 sy faha-3 izay mifanohitra amin'ny fampianarana ny amin'ny Trinite. Ireo fampianarana ireo dia manantitra ny maha tokana an' Andriamanitra (monoteisma) ao amin'ny fivavahana kristiana. Amin'ireo mpanaraka ireo fampianarana ireo dia tsy zanak'Andriamanitra sady samy hafa amin'ny Ray i Kristy. Nizara roa ny Monarkiana, dia ny Adôptianista sy ny Môdalista: ny Adoptianista dia mihevitra fa tsy manam-piaviana araka an' Andriamanitra i Jesoa fa olona ihany nefa natsangan' Andriamanitra ho zanany tamin'ny nanaovana batisa azy.
Ireto koa ny fampianarana hafa isan'ireo mitsipaka ny firaisam-pomban'ny Ray sy ny Zanaka: ny psilantrôpisma, ny sotsinianisma, ny sobôrdinatianisma ary ny onitarisma.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobstansa_(teôlôjia)&oldid=995216"
Dernière modification le 28 Jolay 2020, à 11:54
Voaova farany tamin'ny 28 Jolay 2020 amin'ny 11:54 ity pejy ity.